Wararka Maanta: Jimco, July 13, 2012-AMISOM oo sheegtay in raashin gargaar ah oo la dhacay ay ka heshay saldhig ay Al-shabaab ku lahayd Laanta-buuro
Raashinkan ayay AMISOM sheegtay in Al-shabaab ay ku quudinaysay xoogaggeeda tababarka ku qaadanayay saldhig ay ku lahaayeen deegaankaas oo 10-km Koonfur kaga beegan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.
"Saldhigga waxaan ka helnay hub ay ku jiraan qoryaha daran-doorriga u dhaca iyo qalabka laga sameeyo bambooyinka," ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka. Sidoo kale waxaa warsaxaafadeedka lagu sheegay in 11-dagaalyahan oo Al-shabaab ka tirsan lagu dilay dagaalkii lagu qabaday Laanta-buuro afar kalena nolol lagu qabtay.
Ma jiro hadal kasoo baxay dhinaca Al-shabaab oo ku saabsan hadalkan, iyadoo tani ay imaanayso xilli ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM qabsadeen Balcad iyo Afgooye oo min 30-km u jira magaalada Muqdisho.
Waa markii ugu horreysay oo ay ciidamada AMISOM sheegeen in raashin gargaar ay ka heleen deegaan ay ka qabsadeen Xarakada Al-shabaab tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya iyaga io Al-shabaab muddo laga joogo saddex sano.